Ukubhaliswa KweMarket & Patent EChina - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ukuqhubeka nokuvikela umkhiqizo wakho obalulekile nelungelo lobunikazi lomkhiqizo, iqembu lebhizinisi leFumax lingakusiza ngokulandela inqubo ebalulekile:
1. Bhalisa uphawu lwakho lokuhweba eChina.
2. Faka isicelo se-Chinese patent ngaphansi kwegama lakho.
Ithimba le-Fumax lingaqapha njalo uma uphawu lwakho lokuhweba noma ilungelo lobunikazi laphikisana namanye amaqembu. Sizokunikeza umbiko njalo.
Ungakwenza kanjani ukubhaliswa kophawu lwentengiso lwase China?
Kulula futhi akulula. Uphawu lwentengiso luphawu olusebenzela inhloso ethize futhi eyinhloko yokuhlonza izimpahla noma izinsizakalo zomkhiqizi, ezivumela abathengi ukuthi bahlukanise izimpahla noma izinsizakalo zomkhiqizi omunye komunye.
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukuhwebelana kwembulunga yonke kuxhumene kakhulu ezindaweni ezahlukahlukene, kwezokuxhumana, ukuhamba emhlabeni wonke, ukuthuthuka kwamabhizinisi. Siziveza ngesikhathi esifushane nge-intanethi, ngokufanayo nemikhiqizo noma izinsizakalo zethu. Ukuvikela umaki wakho noma isithombe somkhiqizo kubaluleke kakhulu, hhayi emakethe yangakini kuphela, kodwa nasemhlabeni wonke. I-China ibamba iqhaza elibaluleke kakhulu emnothweni womhlaba wonke ngezimakethe zayo eziphakeme. Yingakho udinga uphawu lokuhweba eChina njengamanje.
I-China izwe lokuqala ukufayela. Kusho ukuthi umuntu obhalisa kuqala uphawu lokuhweba, ozothola wonke amalungelo okusabalalisa nokuthengisa imikhiqizo eChina.
Ungasifaka kanjani isicelo selungelo lobunikazi eChina?
Kubantu bakwamanye amazwe, amabhizinisi angaphandle nezinye izinhlangano zakwamanye amazwe ezinendawo yokuhlala unomphela noma ihhovisi elibhalisiwe eChina, bangajabulela ukwelashwa okufanayo nezakhamizi zaseChina maqondana nokufaka isicelo samalungelo obunikazi nokuvikelwa kwelungelo lobunikazi.
Kwabangaphandle, amabhizinisi angaphandle nezinye izinhlangano zakwamanye amazwe ngaphandle kokuhlala okujwayelekile noma ihhovisi elibhalisiwe eChina, bangafaka izicelo zamalungelo obunikazi kepha kuzofanele bahlangabezane nalezi zimo ezintathu ezilandelayo:
1. Isivumelwano esiphothulwe phakathi kwezwe umfakisicelo akulo neChina.
2. Isivumelwano samazwe omhlaba lapho amazwe womabili ayingxenye yawo.
3. I-China nezwe lapho okufakwa khona umfakisicelo kususelwa kumgomo wokuphindisela.
Izinyathelo zohlelo lokusebenza
1. Umfakisicelo uhambisa isicelo kanye nemibhalo edingekayo ngokulethwa ngesandla noma nge-inthanethi futhi akhokhe imali.
2. I-CNIPA ithola isicelo bese iqhuba ukuhlolwa kokuqala (izicelo zezinto ezisunguliwe zidinga ukuhlolwa okunamandla).